वेश्यासँग बिताएको त्यो एक रात | मझेरी डट कम
Deep Raj Sharma — Sat, 04/13/2013 - 08:03
उसको नाम हो कविना । घरबार कता हो थाहा छैन । उसलाई मान्छे भन्नुभन्दा पनि यौटा मेसिनभन्दा हुन्छ । उसले धेरै पुरुषहहरूसित रात बिताएकी छे । धेरै पुरुषहरूले खेलेका छन उसको शरिरसित- रातभरि, तृप्त नभउनजेल । यस्ता किसिमका स्त्रीहरूलाई समाजले वैश्या भन्दछ । तर, म तिनीहरूलाई देवी भन्दछु; देवी त्यसलाई भनिन्छ, जसले धेरै मानिसहरूको चाहनालाई पुर्ण गर्न सक्तछन । कतिका बाहुपासमा त्यो कविना प्रत्येक दिन बेरिएकी हुन्छे ।
एकदिन म पनि पुगेको थिएँ, कविनाकहाँ । कविनाको ठेगाना मलाई बद्रीले दिएको थियो । बद्री रसिक मान्छे हो, उसको मोबाइल सेटमा कविना जस्तै थुप्रा वेश्याहरूको फोन नम्बर पाउँन सकिन्छ । म कविना कहाँ पुगें, अनामनगरनेर उसले डेरा गरेर बसेकी थिई । अस्त-व्यस्त कोठा थियो उसको, भित्तामा दुई-चार जना फिल्मी कलाकारहरूको चित्र टाँसिएको थियो । एक कुनामा ग्याँसको सिलिन्डर, त्यससँग जोडिएको चुल्हो र केही भाँडाहरू थिए - थाल, कचौरा, कुकर, करै आदि ।
रातको ९ बजिरहेको थियो । उसले मलाई भनीं, "होल नाईटको २००० रुपैयाँ, एक पटक मात्र हो भनें ३०० रुपैयाँ ।"
मैंले भने-"होल नाईट नै हो! "
"खाना खाएर आको हो ?"
"छैन," मैंले भनें ।
"त्यसो भए, केही खाने कुरा लिएर आउने," उसले भनी ।
बाहिर निस्केर मैंले १० वटा बटर नान र राज्माको तरकारी प्याक गरेर ल्याएँ । कविनासँग बसेर मैंले रोटी खाएँ । खादैं गर्दा, म उसको अनुहार पढिरहेको थिएँ । एक अनौंठो भाव झल्किरहेथ्यो त्यस मुहारमा । ठुला सपनाहरू झुम्मिरहेका थिएँ-भाव बनेर । असीमित दबेका आकाँक्षाहरू पोखिएका थिएँ, चित्र कोर्दै कोर्दा कुचीबाट यत्र-तत्र रङ्ग पोखिए जस्तो, पोखिएका आकाँक्षाहरूले उसलाई कुरुप बनाएको थियो । त्यस कुरुपताभित्र पनि कहीँ-कतै सुन्दरता छ जस्तो आभास म निरन्तर गरिरहेथें । त्यो सुन्दरता फोहरको डुङ्गुरभित्र कतै हीरा लुकेको जस्तो थियो, जसलाई प्राप्त गर्न फोहरको डुङ्गुरलाई ओल्ट्याउनु पर्छ, पल्ट्याउनु पर्छ ।
रात्रीको लगभग साढे दस बजेको छ । कोठामा बत्ती बलिरहेछ, क्यासेट प्लेयरबाट गीत बजिरहेको छ - "दो लफ्जों की है दिल की कहाँनी या है मोहब्बत, या है जवानी....." ।
मलाई बद्रीले सल्लाह दिएको थियो - "३-४ पेग लगाएर काम गर्नु, बढी टिक्नेछौ ।"
बद्रीको कुरा मलाई सही लाग्यो । मैंले सिग्नेचर ह्विस्की बोकेर नै आएको थिएँ; एक हाफ र अर्को एक क्वाटर थियो । मैंले पिउँन थालें, कविनालाई पनि निमन्त्रणा मैंले दिएको थिएँ, पिउँन भनी । शुरुमा उसले मेरो प्रस्ताव ठुकराए पनि, मेरो अत्यधिक करसामु उसले हार मान्नु नै पर्योल । हामी दुइले मिलेर ह्विस्की पियौं । मलाई बिस्तारै रक्सी लाग्दै गयो, मलाई नाच्न मन थियो । लागेपछि अन्ठ-सन्ठ कुरा गर्ने मेरो बानी छ । कविनालाई पनि रक्सी लागिसकेको थियो; बिस्तारै ऊ निर्वस्त्र हुँदै गई । उसले चोलो फुकाली, साडी फुकाली । मलाई मन थियो कि उसले पहिरेको पेटिकोट र ब्रा मेरो हातबाट फुकालियोस।
उसले ब्रा र पेटिकोट फुकाल्नै लागेकी थिई ।
मैंले उसलाई रोकें - "यो काम मेरो हातबाट हुन देऊ ।"
रक्सीमा चुर मैंले त्यो काम कति बेला फत्ते गरें, त्यसको होस नै मलाई छैन । ऊ निर्वस्त्र भई ।
ओछ्छ्यानउपर ऊ पल्टेकी छ । उसलाई निर्वस्त्र देख्दा मलाई नि निर्वस्त्र हुन मन लाग्यो । अर्को क्षण म निर्वस्त्र भैसकेको थिएँ । अब ..... म अकमक्क परें केहीं पल । मैंले के गर्नु पर्छ अब ? म जान्दिन केही । बस, मैंले कविनालाई तानें र क्यासेट प्लेयरको कान बटारेर गीतको आवाज बढाएँ । अनि ..... रातभर कविना र म निर्वस्त्र भएर नाँचिरह्यौं, नाँचिरह्यौं। नाच्दा-नाच्दै कति बेला आँखा लागेछन मैंले पत्तो नै पाइन । बिहान उठ्दा मैंले आफूलाई ओछ्छ्यानउपर निर्वस्त्र भेटें, कविना उठिसकेकी थिई । उसले चिया लिएर म नगिच आई । मलाई- आफ्नो निर्वस्त्र शरिर उसको आँखासामु पर्दा- लज्जाबोध भयो । तर, मौन रहें । चिया पिउदै म सोचिरहेको थिएँ, मैंले हिजो राति कविनासँग के के गरें ? हिजो गरेका कुराहरू .... लुगा फुकालेर, हामी दुई नाचेका थियौं, आँखा नलागुनजेल ।
म चिया पिउँनासाथ कविनाको डेराबाट निस्किने तर्खरमा थिएँ । कविनाको हातमा २००० रुपैयाँ थमाएँ । उसले भनीं, "म तपाईंसित पैसा लिन्न ।"
उसले एउटा कागजको टुक्रा मेरो हातमा थमाई, "यसलाई फुर्सत भा बेला पढ्नु होला ।"
अनामनगरबाट रत्नपार्कसम्म म हिड्दै- हिड्दै आएँ । मगजभित्र विगत रातका कुराहरू खेलिरहेका थिए । मैंले कविनासित गर्नु पर्ने काम त गर्दै गरिन- यस्तै यस्तै कुराहरू सम्झेर म पश्चाताप गरिरहेको थिएँ । अनि एक्कासी त्यो कागजको टुक्रा सम्झें, "कागजको टुक्रामा के लेखेर दिईहोला उसले ?"
कागज ओल्टाएर हेरें, लेखेको थियो -
"आजसम्म धेरैले मेरो शरीरसँग खेलेर आनन्द बटुलेका छन । तर प्रथम पटक आज यस्तो भयो, जब मेरो शरीरबाट आनन्द बटुल्न आएको यौटा ग्राहकले उल्टो मलाई नै आनन्द दिएर गयो । अर्को पाली अब कहिले आउनुहुन्छ?”
म भन्न सक्तिन, म कविनाकहाँ अब कहिले जान्छु भनेर । तर, म जान्छु; छिटै जान्छु, आखिर कविना जस्ता वैश्याहरूलाई म देवी जो ठान्दछु ।
चित्ता माथि जल्दै गर्दा
साँझपख घामको आशा गरे जस्तो भो
होली: हाम्रो मस्तको चाड !
आज फेरि दुख्यो ।
म निकाल्न दिन्न हावाबाट बिजुली